basy – Page 2 – Midi Madagasikara
Antsirabe : Jiolahy dimy voasambotra, mpanamboatra basy ny iray
Redaction Midi Madagasikara 1 avril 2014 Andranomafana, Antsirabe, basy, Betafo, Jiolahy, polisy
Jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana miisa dimy indray no saron’ny polisy ny alin’ny zoma hifoha sabotsy lasa teo. Tato ho ato dia saika ahitam-bokatra hatrany ny hetsika ataon’ny mpitandro filaminana eto Antsirabe. Tra-tehaky ny polisy manao fisafoana amin’ny alina mantsy ny jiolahy telo lahy tao Andranomafana. Nanaitra ny polisy manao fisafoana ny fihetsik’izy telo ireto fa…
Ambatofinandrahana : Dahalo maty voatifitra, nahatratrarana basy Mas 36 sy bala efatra tratra
Redaction Midi Madagasikara 6 mars 2014 Ambatofinandrahana, bala, basy, Dahalo
Nirefodrefotra indray ny basy tany Ambatofinandrahana ny alatsinainy teo. Vokatry ny fifandonana teo amin’ny mpitandro filaminana sy ireo andian-dahalo nirongo basy saika hanafika tao Fenoarivo dia malaso iray nikoizana nampitondra faisana an’iny faritra iny no maty voatifitry ny zandary, na dia noezahina notsaboina teny amin’ny hopitaly aza, noho ny ratra mafy nahazo azy teo amin’ny…
Analamahitsy : Fahatratrarana basy sy bala ary fitaovana maromaro hoentina manafika
Redaction Midi Madagasikara 28 février 2014 Analamahitsy, basy, chloroforme, Jiolahy, Marais Masay, scotch, zandary
Arifomba tokoa ny fitaovana entin’ireo jiolahy manafika Teny Analamahitsy, ny sabotsy lasa teo, no tratehaky ny zandary teny Analamahitsy Marais-Masay ny andian-jiolahy mitam-basy. Enina izy ireo no fantatra fa ao anin’ity tarika mpanao ratsy ity, araka ny loharanom-baovao. Jiolahy efatra no voasambotra fa ny roa kosa tafatsoaka. Vaovao azo avy amin’ny fitsongona dia tetsy sy…
Nanaitra ny olona tokoa ny marainan’ny zoma teo tetsy Ivato ny fipoakan’ ny feom-basy ka nampikoropaka ny sasany.Nisy tamin’ ireo mponina mihitsy aza no efa niezaka hiantso ny mpitandro filaminana fa noheverin’izy ireo ho olon-dratsy manao fanafihana. Sarinady sy fanazarantena anefa no nitranga, satria mpianatra efatra ho mpitsara no nanao fanazarantena nitifitra tamin’ny ” pistolet…
Mandoto : Dahalo folo nitondra basy nanafika
Redaction Midi Madagasikara 19 février 2014 Ankazondrano, basy, Dahalo, Mandoto
Ny alatsinainy 18 febroary teo, tokony tamin’ ny sivy ora sy sasany maraina no tonga nanafika ny tanàn’ Ankazondrano ny dahalo folo lahy. Basim-borona sy kibay ary antsy no teny antanàn’ izy ireo tamin’ izany ; tonga dia niditra ankeriny tao an-tanàna izy iero ka nanambana avy hatrany izay sendra azy tsy hiantso vonjy na hikiakiaka,…
Accès banque : Mpiambina minisitry ny FAT i Zorgie
Redaction Midi Madagasikara 17 février 2014 Accès banque, Andavamamba, basy, BC, polisy
Mandroso hatrany ny fanadihadiana etsy Anosy. Ankoatra ny efa namantarana ny roa tamin’ireo mpanafika ny Accès Banque Andavamamba ,ka namoahana “avis de recherche“ an’i Voay sy Zeorgie dia mbola mitombo bebe kokoa hatrany ny vaovao momba azy ireo. Loharanom-baovao akaiky ny mpanao fanadihadiana no nahafantarana fa mpiambina ny minisitra iray tamin’ny andron’ny tetezamita i Zeorgie.…
Ankadindramamy : Mpivarotra dimy notetezin’ny jiolahy mitam-basy
Redaction Midi Madagasikara 17 février 2014 Ankadindramamy, basy, épicerie, Jiolahy, kalachnikov, pistolet
Nirefodrefotra ny basy nandritra ny fanafihan’ny jiolahy ny tanàna. Eny, ny tanàna iray manontolo mihitsy no notetezin’ity andian-jiolahy ity ny alin’ny asabotsy teo. Ireo mpivarotra no tena nataon’ireo lasibatra nandritra ity asaratsy ity. Tokony ho tamin’ny valo ora sy sasany teo izy ireo no nanomboka nanao ny fanafihana. Enina izy ireo ka vehivavy ny iray,…
Accès Banque : Efa samy nigadra izy roa lahy
Redaction Midi Madagasikara 15 février 2014 Accès banque, Ambohipo, basy, Jiolahy, Tsiafahy
Na I Voay na I Zorgie dia efa samy nigadra teny Tsiafahy avokoa. Fanafihan-jiolahy ny an’itsy voaloha ary efa nahavita sazy izy raha araka ny fantatra. Vonoan’olona teny Ambohipo kosa ny an’itsy faharoa, raha araka ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao fanadihadiana. Mbola samy mitazona basy izy ireo raha araka ny fanazavan’ny mpitandro ny filaminana. Sokajiana…
Ankadifotsy : Mpivaron-kena voatafika
Redaction Midi Madagasikara 12 février 2014 Ankadifotsy Befelatanana, basy, Jiolahy
Efa teo am-piomanana hanidy tsena ny mpivaron-kena iray tetsy Ankadifotsy-Befelatanana no tonga tampoka ny jiolahy roa mitam-basy. Tsy nisy resaka fa ny fihetsika fotsiny dia efa nanambara ny tanjon’ireo. Nambanana basy ny mpivaron-kena ary nasaina namoaka ny vola tao anaty “caisse”. Raha ny fanazavana azo momba ity tranga ity dia mitentina 400.000 ariary ny lasa…
Fanafihana tetsy Analamahitsy : Basy fanairana no nampiasain’ireo jiolahy
Redaction Midi Madagasikara 23 janvier 2014 Analamahitsy, basy, Fanafihana
Nirefodrefotra ny basy saingy tsy nahitàna taim-bala na ny iray aza. Nazava avy hatrany teo fa basy fanairana na “pistolet d’alarme” no nampiasain’ireo olon-dratsy. Midika avy hatrany izany fa nentina nampitahorana ireo mpivarotra efatra karazana fotsiny ireo fitaovana, fitaovam-piadiana fanairana na koa fampiasa amin’ny fampahafantarana fanombohana amin’ireny fifaninanana hazakazaka ireny. Toe-javatra izay mateti-pitranga ihany izany…